Tusmadii Waasuge (Sheeko Gaaban).Qallinkii. Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud | Codka Harawo
You are here : Codka Harawo » Arimaha Bulshada iyo Aragtida Akhristaha » Tusmadii Waasuge (Sheeko Gaaban).Qallinkii. Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud
Posted by admin on April 27th, 2019 08:49 AM | Arimaha Bulshada iyo Aragtida Akhristaha
Qurbojoog ayaa intaasi shirar dibada ka wada, is abaabulaya oo qaadhaan ururis ku jira. Ha yeeshee cadadka dhaqaale ee ay soo diraan iyo cidda ay u soo diraan cid hubaal ahaan u ogi ma jirto. Wiilasha wada degan ee xadka beerta isku qabtay, ka dibna nasiibdaradu ka adeegtay ee shilka keentay, ayuu kiiskoodu badaha waawayn ka talaabay oo caloolxumada iyo dhiilada laga dareemayaa shanta qaaradood ee waaweynba. Shirarka jaraa’id iyo dagaalka afku waa tirabeel oo alaadaha casriga ah agabkooga kala duwan ayaa si buuxda la iskugu adeegsaday. Ma cunsurka qabiilka ayaa sidaasi u saamayn badan oo cid walba dhaqaajinaya, ma wiilka hoyday ayaa ahaa halyay madi ah oo aan dib u dhalan doonin, ma gardarro ka dhiidhi baa, mise mar hadduu la dhashay Waasuge, waa laandheere abtirsaday oo lama taabtaan ah. Mid ay tahayba, xarraarada kiiskan ka dhalatay, miyi iyo magaalo, bad iyo berri, gude iyo dibadba way saamaysay.
Ayaandarro, waa ta xaaladdii faraha ka baxday ee dagaal sokeeye oo aan waxba la iskula hadhin gayigii ka qarxay. Ismahurtaddii waa ta la isku lisay; iyaguna waa kuwa birta iska aslay. Tiro ma leh inta curraddo dalka ciidan u noqon lahaa, macno darro dagaalkaas laga fursan karayay, ku qudhbaxay. Kummanaan ka badan inta hooyooyin wiilashoodii waayay. Intaas in la mid ahi, waa kuwo asay qaaday ka dib markii raggoodii ay is boqno gooyeen. Tiro taas toban jibaarkeed ah oo caruur ahi waa kuwa agoomoobay ee aabo beelay. Ummulo dooxa iyo boqnogoyska meesha ka dhacay waa oday ka sheekee. Boqolaal kun oo labadii qolo ee isdilayay ah iyo bulshadii kale ee deegaankuba, waa kuwa xeryo qoxooti loo ooday ee shisheeye ku masruufo. Deegaankii beeraha iyo xoolaha caanka ku ahaa, wax soo saarka dalkana kaalin muuqata kaga jiray, colaadda gayigaasi ka aloosani waa ta u rogtay gegi cidlo ah, geyi abaareed, omos iyo arlo lagu riiqday.
Waasuge wuu hawlgabay oo da’ baa ka daba timid. Wuxuun buu hadda ku dadaalaa in makasta xerada qoxootiga ku jirtaa nabad ku wada noolaadaan. Maalmaha war dhiilo leh laga keeno deegaamaddii ay ka soo bara kaceen, intan shisheeyuhu sida wadarta ah u quudinayo ee xerada ku oodan ayaan is bixinihayn. Isaga iyo qolyo kooban oo la aragti ahi, nabadaynta dadkan baahan ee haddanna xummadda qabiilku madaxmartay ayay ku hawlan yihiin. Waasuge isaga oo dadaalkaas ku jira ayay tii Alle ugu timid xerada barakacayaasha. Maanta oo ay aaskiisii joogaan ayay labadii qoloba ilmadii yaxaaska qubayaan. Kulaylka iyo dhibta soo gaadhay waxay dib u xusuusinaysaa taladiisii waayeelnimo ee ay ku dagi lahaayeen, balse aan la solansiin. Way hibataynayaan oo waa kuwaas xabaashiisa maanta ka dul barooranaya ee qiraya taladiisii wacnayd ee seegtay. Sidaasi oo ay tahay, iyadba waa yaabka yaabkiise, ficil dagaalka sii huriya mooyee, ma leh karti ay nabad ku dhaliyaan. Keeni kari waaye tallo inta nool badbaadisa, xabbadda ka joojisa, xeryaha barakacayaasha ka saarta, dib u dejisa arladii ay ka soo qaxeen, beer falasho, iyo xoolo-dhaqid na dib ugu celisa. Midka kaliya ee ay heshiiska ku yihiin, labada dhinac ee is dilay ba, waa guurtinimadii iyo samataliskii Waasuge. Maxayse ugu taal maanta mar haddii wixii haad arladda joogay gayigoogan u soo guuray, galowgu wali aamus diidan yahay, maydku duleedada wadhan yahay, ubadkuna sidii u dacdaraysan yihiin.
« Weedho Siyaasadeysan Oo Kulul Oo Ay Is Waydarsadeen Siyaasi Duur Iyo Wasiir Maxamed Kaahin
Baarlamaanka Ingiriiska Oo Su’aalo Ku Saabsan Doorashada Wakiilada Iyo Xaaladda Xuquuqal Insaanka Somaliland Weydiiyay Wasiirul Dawlahooda Khaarajiga »